10 प्रकारका YouTube भिडियोहरू जुन तपाइँको साना व्यवसाय बृद्धि गर्न मद्दत गर्दछ Martech Zone
बिराला भिडियोहरू र विफल संकलनहरू भन्दा यूट्यूबमा अधिक छ। वास्तवमा, त्यहाँ अझ धेरै छ। किनभने यदि तपाइँ नयाँ व्यवसाय हुनुहुन्छ भने ब्रान्ड सचेतना बढाउन वा बिक्रीलाई बढावा दिन, YouTube भिडियोहरू कसरी लेख्ने, फिल्म गर्ने र प्रमोट गर्ने जान्नु आवश्यक छ। २१ औं शताब्दीको मार्केटिंग सीप.
बिक्रीलाई अवलोकन रूपान्तरण गर्ने सामग्री सिर्जना गर्न तपाईंलाई विशाल बजार बजटको आवश्यकता पर्दैन। यो सबै लिन्छ स्मार्टफोन र व्यापारको केही चालहरू। र तपाइँ जान्न सक्नुहुन्छ कि पेशेवरहरूले कसरी यो प्रगति क्यापिटलको गाईडसँग 10 YouTube भिडियोहरू जुन प्रत्येक सानो व्यवसायमा हुनुपर्दछ।
तपाईंको व्यवसायको लागि किन YouTube भिडियोहरू बनाउने?
यूट्यूबको शक्तिलाई सम्मान गर्ने कम्पनीहरूले आफूलाई सबै इन्टरनेट प्रयोगकर्ताहरूको तेस्रोमा प्रकट गर्दैछ। यो अनुमान गरिएको छ कि हरेक महिना २ अरब भन्दा बढी मानिसहरूले YouTube भ्रमण गर्छन्, दैनिक संख्यामा प्रयोगकर्ताहरूको एक महत्त्वपूर्ण संख्याको साथ। यसबाहेक, गुगल पछाडि युट्यूब विश्वको दोस्रो ठूलो खोज इञ्जिन हो। यसले यसलाई सम्भावित ग्राहकहरूको पहिलो स्थानहरूमा पुर्‍याउँछ जब उत्पादनहरू र सेवाहरूको जानकारी खोज्दै जान्छन्।
अझ महत्त्वपूर्ण कुरा, राम्रोसँग क्राफ्ट गरिएको YouTube भिडियोले तपाईंको ग्राहक सूची र बिक्री बढाउनेछ। हेडवे क्यापिटलद्वारा गरिएको अनुसन्धानले पत्ता लगायो कि% 73% व्यक्तिहरूले प्रदर्शन वा समीक्षा भिडियो हेरेपछि उत्पादन किन्न बढी सम्भावना हुन्छ। समग्रमा, उत्पादन भिडियोहरूले लगभग १ 150०% ले खरीदको संभावना बढाउँछन्।
कस्तो प्रकारको यूट्यूब भिडियो तपाईंको व्यवसाय बनाउनु पर्छ?
तपाईंलाई थाहा छ किन तपाईंलाई YouTube भिडियोहरू बनाउनु पर्छ। त्यसोभए अब कस्तो प्रकारको भिडियो बनाउने भनेर निर्णय गर्ने समय आइसकेको छ।
तपाईं एक सीधा उत्पाद स्पटलाइट भिडियोको साथ जान सक्नुहुन्छ। यो एक नयाँ उत्पादन नयाँ प्रदर्शन र यसको सुविधाहरू र लाभहरू हाइलाइट गर्ने उत्तम तरिकाहरूमध्ये एक हो।
कसरी भिडियोहरू अर्को विकल्प हो। स्पटलाइट भिडियो जस्तै, कसरी सामग्रीले ग्राहकलाई उत्पादनलाई कार्यमा देख्न मद्दत पुर्‍याउँछ, उनीहरूलाई विश्वास दिलाउँदछ कि यसले विज्ञापन गरिएको कार्य गर्दछ। तिनीहरू पनि उत्कृष्ट ग्राहक सेवा प्रतिनिधित्व गर्दछ र तपाईंको व्यापार मा घर्षण अंक कम। पाँच मिनेटको डेमो भिडियो शूटि ग्राहकहरूको कलहरू लिन वा ईमेलहरूको उत्तर दिनको लागि पाँच कर्मचारी राख्नु भन्दा धेरै खर्चिलो हुन्छ।
प्रशंसापत्र भिडियो वास्तविक व्यक्ति वा प्रभावकर्ताहरू तपाइँको उत्पादनहरु संग आफ्नो संतुष्टि व्यक्त देखाउँछन्। यस प्रकारको सामग्रीले प्रामाणिकता र विश्वासको भावना सिर्जना गर्दछ। व्यक्तिहरूले उनीहरूका साथीहरू वा उनीहरूको मान वा जीवनशैली विकल्पहरू साझा गर्ने कसैको सिफारिसको आधारमा उत्पादन किन्न बढी सम्भावना हुन्छ।
अन्तमा, त्यहाँ अनबक्सि and र शपिंग हल भिडियोहरू छन्। यी भिडियोहरूले नयाँ खरीदसँग सम्बन्धित उत्तेजना र प्रत्याशाको भावनाको नक्कल गर्दछ।
र कुनै पनि राम्रो विज्ञापन कार्यकारी (वा अभियान राजनीतिज्ञ) ले तपाईंलाई भन्छन्, हामी मानवहरू त्यस्तो तर्कसंगत छैनौं जुन हामी सोच्न चाहन्छौं। यसको सट्टा, हामी झुकाउँछौं भावनामा आधारित निर्णय गर्नुहोस् बरु चिसो हार्ड तथ्य भन्दा। त्यसोभए यदि तपाइँ तपाइँको श्रोताको भावनालाई उत्तेजित गर्न सक्नुहुन्छ, तपाइँ उनीहरूलाई भुक्तान गर्ने ग्राहकहरूमा रूपान्तरण गर्ने बढी सम्भावना हुनुहुन्छ।
कसरी यूट्यूब सामग्री बनाउने कि परिणाम ड्राइभ?
तपाइँलाई चाहिने पहिलो कुरा केहि हो किरा। तर तपाईंले महँगोमा बैंक तोड्नु पर्दैन बत्ती रि rig। केहि सब भन्दा सफल YouTubers एक सभ्य स्मार्टफोन र सम्पादन सफ्टवेयर भन्दा अधिक केहि को साथ हप्ता लाखौं दृश्यहरु लाई आकर्षित गर्दछ। अधिक जटिल भिडियोहरूको लागि, त्यहाँ धेरै स्वतन्त्र सामग्री निर्माता र डिजिटल एजेन्सीहरू छन् जुन तपाईंको सामग्री शूट गर्ने र उत्पादन गर्ने छन्।
तपाईंलाई पनि एक आवश्यक छ लिपि। यो सायद कुनै पनि प्रकारको सामग्रीको सब भन्दा महत्वपूर्ण अंश मध्ये एक हो। स्क्रिप्टले संरचना निर्माण गर्दछ; यसले दर्शकलाई यात्रामा लैजान्छ, उनीहरूको भावनालाई उत्तेजित पार्दै र एक विशिष्ट कार्यतर्फ दिशा निर्देशन, जस्तै वेबसाइट भ्रमण गर्ने वा खरीद गर्ने।
लिपिहरू जटिल हुनु हुँदैन। केवल आधारभूत तीन कार्य संरचनामा ध्यान दिनुहोस्: सेटिंग, द्वन्द्व, वा रिजोलुसन। अर्को शब्दहरुमा, तपाईलाई सुरूवात, मध्य र अन्त चाहिन्छ।
यदि तपाईं ह्यान्डहेल्ड बाइक पम्प बेच्ने कोशिश गर्दै हुनुहुन्छ भने कहानी यस्तै प्रकारले जान सक्दछ।
केटा जs्गलमा (बाइकमा) बाइक चढ्न जान्छन्, त्यसपछि ऊ एक सपाट टायर पाउँछ र ज in्गलमा टक्राउँदछ (द्वन्द्व), त्यसपछि उसले आफ्नो बाइक पम्प बाहिर निकाल्छ, टायर फुलाउँछ र खुशीसाथ सूर्यास्तमा चढ्छ (रिजोलुसन) )। बाइक मा केटा नेतृत्व हुन सक्छ, तर शो को वास्तविक स्टार बाइक पम्प हो।
यहाँ पेशेवर केहि देखिने YouTube भिडियो कसरी बनाउने भन्ने बारे मा केहि सल्लाहहरु छन्।
टैग: पर्दा भिडियो पछाडिब्रान्ड भिडियोहरूecommerce भिडियोहरूअगाडि राजधानीप्रभावक भिडियोहरूइंफोग्राफ़कटोलीका भिडियोहरू भेट्नुहोस्उत्पादन समीक्षा भिडियोहरूउत्पादन स्पटलाइट भिडियोभर्ती भिडियोहरूकिनमेल भिडियोहरूसानो व्यवसाय भिडियोSMBस्टोरीबोर्डबाटप्रशंसापत्र भिडियोYouTube भिडियो को प्रकारहरूअनबक्सिंग भिडियोहरूभिडियो कल-टु-एक्शनभिडियो संलग्नताभिडियो प्रकाशभिडियो लिपिभिडियो स्टोरीबोर्डभिडियो सल्लाहहरूभ्वाइसओभरयूट्यूब इन्फोग्राफिकयूट्यूब मेट्रिक्सयूट्यूब थम्बनेलYouTube भिडियोYouTube भिडियो लिपिYouTube भिडियोहरूYouTube भ्वाइसओभर